सम्झनामा अन्जना :केही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट [भिडियो हेर्नुहोस ] – सुदूरखबर डटकम
सम्झनामा अन्जना :केही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट [भिडियो हेर्नुहोस ]
केही दिन पहिले ललितपुरको ढोलाहिटी निवासी ३५ वर्षीय उज्ज्वल महत (जेठाजु) ले २५ वर्षीया अन्जना लामा (बुहारी)लाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे । अन्जना लामा महतको हत्या हुनु भन्दा केही समय पहिले फोटो सुट गरेको भिडियो बाहिर आएको छ । अन्जना लामा महको हत्या उनकै घरको कोठामा जेठाजुले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । बीभत्स हत्या पछि अन्जनाको परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ । यसै घटना लाई लिएर फरक फरक कुराहरू मिडियामा आइरहेका छन् ।ललितपुर महानगरपालिका-२६ ढोलाहिटी बस्ने २५ वर्षीया अञ्जना लामा महतलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा मृतकका आफ्नै जेठाजु ३५ वर्षीय उज्वल महतलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे।
उज्वलले धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्दा अञ्जना लामाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएकाे छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितपुरको ढोलाहिटीमा जेठाजुले भाई बुहारीकोे खुकुरी हानेर हत्या गरेका छन् । बिहिबार दिउसो ललितपुरको ढोलाहिटस्थित भाईबुहारी २५ बर्षिय अन्जना लामाकाो ३५ बर्षिय उज्वल महतको हत्या गरेको महानगरिय प्रहरी बृत चापागाउँले जानकारी दिएको छ । हत्याको आरोपी उज्जल महतले प्रहरी समक्ष आत्मसर्मपण गरेका छन् । हत्या कसरी भयो भन्ने विषायमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी सहायक निरिक्षक राजेश देवकोटाले बताए् ।
शनिबारको दिनमा साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ असार २८ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।#जय_संकटादेवी !!
दैनिक जसो विहानीको समयमा पानी पिउनाले चमत्कारिक फाईदा हुने, जानकारी सहित
बर्खाको यो समयमा कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको गाडीनै फस्यो बागमती सडक कोरिडोरमा
अविरल वर्षासँगै पहिरोले काभ्रे र रामेछापमा गरी ३ जनाको मृत्यु
सप्तकोशी नदीमा बालियो रातो बत्ती, के फेरी पनि ढोका बन्द नै गर्ला त भारतले ?
साहरुख खान देखि सलमानलाई पछार्दै अक्षय कुमार बने फोब्र्सको ३३ औँ सुपरस्टार, कति कति कमाए यो वर्ष ?
भारी बर्षाका कारण जनकपुरधाम जलमग्न